Levitikusi 15 | IBhayibheli Elikuyi-Internet | INguqulo Yezwe Elisha
ULIMI Cuban Sign Language Hindi (Roman) ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Armenia (SaseNtshonalanga) Isi-Ashaninka Isi-Aymara Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Efik Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iceland Isi-Igbo Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Oromo Isi-Osset Isi-Otetela Isi-Uighur (SesiCyrillic) Isi-Ukraine Isi-Umbundu Isi-Uzbek IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseToba) IsiBemba IsiBhunu IsiBicol IsiBislama IsiBulgaria IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChewa IsiCreole SaseHaiti IsiCreole SaseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGa IsiGalicia IsiGeorgia IsiGreki IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiJava IsiKannada IsiKaren (isiS'gaw) IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKosraean IsiLao IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLozi IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMalta IsiMarathi IsiMaya IsiMotu IsiMyanmar IsiNavajo IsiNepali IsiNgisi IsiNias IsiNorway IsiNtaliyane IsiNzema IsiPangasinan IsiPedi IsiPennsylvania German IsiPersia IsiPolishi IsiPunjabi IsiPutukezi IsiPutukezi (SasePortugal) IsiQuechua (Sase-Ancash) IsiQuechua (Sase-Ayacucho) IsiQuechua (SaseBolivia) IsiQuechua (SesiHuallaga Huánuco) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwahili (SaseCongo) IsiSwati IsiSwidi IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTicuna IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTonga IsiTonga IsiTonga (SaseMalawi) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTumbuka IsiTurkey IsiTurkmen IsiTuvalu IsiTwi IsiTzotzil IsiVenda IsiVietnam IsiWallis IsiWaray-Waray IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu Punjabi (Roman) ULimi Lwezandla Lwase-Albania ULimi Lwezandla Lwase-Argentina ULimi Lwezandla Lwase-Australia ULimi Lwezandla Lwase-Ecuador ULimi Lwezandla Lwase-Indonesia ULimi Lwezandla Lwase-Ireland ULimi Lwezandla Lwase-Israel ULimi Lwezandla Lwase-Italy ULimi Lwezandla Lwase-Uruguay ULimi Lwezandla LwaseBolivia ULimi Lwezandla LwaseBrazil ULimi Lwezandla LwaseBrithani ULimi Lwezandla LwaseChile ULimi Lwezandla LwaseChina ULimi Lwezandla LwaseColombia ULimi Lwezandla LwaseCosta Rica ULimi Lwezandla LwaseCroatia ULimi Lwezandla LwaseCzech ULimi Lwezandla LwaseFinland ULimi Lwezandla LwaseFrance ULimi Lwezandla LwaseGhana ULimi Lwezandla LwaseGreece ULimi Lwezandla LwaseGuatemala ULimi Lwezandla LwaseHonduras ULimi Lwezandla LwaseHungary ULimi Lwezandla LwaseJalimane ULimi Lwezandla LwaseJamaica ULimi Lwezandla LwaseJapane ULimi Lwezandla LwaseKenya ULimi Lwezandla LwaseKorea ULimi Lwezandla LwaseMadagascar ULimi Lwezandla LwaseMalawi ULimi Lwezandla LwaseMalaysia ULimi Lwezandla LwaseMelanesia ULimi Lwezandla LwaseMelika ULimi Lwezandla LwaseMexico ULimi Lwezandla LwaseMozambique ULimi Lwezandla LwaseMyanmar ULimi Lwezandla LwaseNdiya ULimi Lwezandla LwaseNew Zealand ULimi Lwezandla LwaseNicaragua ULimi Lwezandla LwaseNigeria ULimi Lwezandla LwaseNingizimu Afrika ULimi Lwezandla LwasePanama ULimi Lwezandla LwaseParaguay ULimi Lwezandla LwasePeru ULimi Lwezandla LwasePhilippines ULimi Lwezandla LwasePoland ULimi Lwezandla LwasePortugal ULimi Lwezandla LwaseQuebec ULimi Lwezandla LwaseRomania ULimi Lwezandla LwaseRussia ULimi Lwezandla LwaseSalvador ULimi Lwezandla LwaseSlovenia ULimi Lwezandla LwaseSpain ULimi Lwezandla LwaseSweden ULimi Lwezandla LwaseTaiwan ULimi Lwezandla LwaseThailand ULimi Lwezandla LwaseVenezuela ULimi Lwezandla LwaseVietnam ULimi Lwezandla LwaseZambia ULimi Lwezandla LwaseZimbabwe ULimi Lwezandla LwesiBelgium LwaseFrance ULimi Lwezandla LwesiDashi ULimi Lwezandla LwesiFlemish Ulimi Lwezandla LwaseSlovakia Ulimi Lwezandla LwaseTurkey Uzbek (Roman)
Ukungcola okuphuma ezithweni zangasese (1-33)
15 UJehova waqhubeka ekhuluma noMose no-Aroni, wathi: 2 “Khulumani nama-Israyeli, nithi kuwo, ‘Uma owesilisa ephuma ukungcola esithweni sangasese, lokho kungcola kumenza angcole. + 3 Ungcolile ngenxa yokungcola okuphuma kuye, kungakhathaliseki ukuthi ukungcola okuphuma esithweni sangasese kuyaqhubeka noma kuvimbekile, usangcolile. 4 “‘Noma yimuphi umbhede umuntu ophuma ukungcola esithweni sangasese alala kuwo uzoba ongcolile, noma yini ahlala kuyo izoba engcolile. 5 Umuntu othinta umbhede wakhe kumelwe awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ongcolile kuze kuhlwe. + 6 Noma ubani ohlala phezu kwento umuntu ophuma ukungcola esithweni sangasese abehlezi kuyo kufanele awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ongcolile kuze kuhlwe. 7 Noma ubani othinta inyama yomuntu ophuma ukungcola esithweni sangasese kufanele awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ongcolile kuze kuhlwe. 8 Uma lowo ophuma ukungcola esithweni sangasese ekhafulela ohlanzekile, lowo ohlanzekile kumelwe awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ongcolile kuze kuhlwe. 9 Noma yisiphi isihlalo sehhashi umuntu ophuma ukungcola esithweni sangasese ahlezi kuso sizoba esingcolile. 10 Noma ubani othinta noma yini ebingaphansi kwakhe uzoba ongcolile kuze kuhlwe, noma ubani othwala lezo zinto uzowasha izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ongcolile kuze kuhlwe. 11 Uma lowo ophuma ukungcola esithweni sangasese + ethinta umuntu engazigezile izandla zakhe ngamanzi, lowo muntu kumelwe awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ongcolile kuze kuhlwe. 12 Isitsha sobumba esithintwa umuntu ophuma ukungcola esithweni sangasese kufanele siphihlizwe, noma yisiphi isitsha sokhuni kufanele sigezwe ngamanzi. + 13 “‘Lapho ukungcola okuphuma esithweni sangasese kunqamuka, lowo muntu eba ohlanzekile, uyobe esebala izinsuku eziyisikhombisa zokuhlanzwa kwakhe futhi kumelwe awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi agelezayo, abe ohlanzekile. + 14 Ngosuku luka-8 kufanele athathe amahobhe amabili noma amaphuphu amabili amajuba, + eze phambi kukaJehova emnyango wetende lokuhlangana awanike umpristi. 15 Umpristi uzowanikela, elinye libe umnikelo wesono, elinye libe umnikelo oshiswayo, umpristi uzomenzela isihlawulelo phambi kukaJehova ngokuphathelene nokungcola okuphuma esithweni sangasese. 16 “‘Uma kuphuma isidoda endodeni, kufanele igeze wonke umzimba wayo ngamanzi ibe engcolile kuze kuhlwe. + 17 Kumelwe ihlanze ngamanzi noma iyiphi ingubo nanoma isiphi isikhumba okuphumele kuso isidoda, kuzoba okungcolile kuze kuhlwe. 18 “‘Lapho indoda ilala nowesifazane bese kuphuma isidoda, kufanele bageze ngamanzi babe abangcolile kuze kuhlwe. + 19 “‘Uma owesifazane ephuma ukungcola okuyigazi esithweni sangasese, uzoqhubeka izinsuku eziyisikhombisa esekungcoleni kwakhe kokuya esikhathini. + Noma ubani omthintayo uzoba ongcolile kuze kuhlwe. + 20 Noma yini alala kuyo esekungcoleni kwakhe lapho esesikhathini izoba engcolile, yonke into ahlala kuyo izoba engcolile. + 21 Noma ubani othinta umbhede wakhe kufanele awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ongcolile kuze kuhlwe. 22 Noma ubani othinta noma iyiphi into abehlezi kuyo kufanele awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ongcolile kuze kuhlwe. 23 Uma ebehlezi embhedeni noma kwenye into, ukuyithinta kwakhe kuzomenza angcole kuze kuhlwe. + 24 Uma indoda ilala nowesifazane futhi ingcoliswa yigazi lakhe lokuya esikhathini, + izoba engcolile izinsuku eziyisikhombisa, nanoma yimuphi umbhede elala kuwo uzoba ongcolile. 25 “‘Lapho ukungcola okuyigazi okuphuma esithweni sangasese sowesifazane kuphuma izinsuku eziningi + kungesona isikhathi sakhe esivamile sokuya esikhathini, + noma uma kwenzeka opha isikhathi eside kunesikhathi avame ukusithatha lapho eya esikhathini, zonke izinsuku aphuma ngazo ukungcola esithweni sangasese uzoba ongcolile, njengasezinsukwini zokungcola kwakhe lapho esesikhathini. 26 Noma yimuphi umbhede alala kuwo ngezinsuku aphuma ngazo ukungcola esithweni sangasese + uzoba njengombhede wokungcola kwakhe lapho esesikhathini, nanoma iyiphi into ahlala kuyo izoba engcolile njengokungcola kwakhe lapho esesikhathini. 27 Noma ubani oyithintayo uzoba ongcolile futhi kumelwe awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ongcolile kuze kuhlwe. + 28 “‘Nokho, lapho esehlanzekile ekungcoleni kwakhe okuphuma esithweni sangasese, uzozibalela izinsuku eziyisikhombisa, kamuva abe ohlanzekile. + 29 Ngosuku luka-8 kufanele athathe amahobhe amabili noma amaphuphu amabili amajuba, + awalethe kumpristi emnyango wetende lokuhlangana. + 30 Umpristi uzokwenza elinye libe umnikelo wesono elinye libe umnikelo oshiswayo, umpristi amenzele isihlawulelo phambi kukaJehova ngokuphathelene nokungcola kwakhe okuphuma esithweni sangasese. + 31 “‘Ngakho kumelwe nigcine ama-Israyeli ehlanzekile ukuze angafi ngenxa yokungcola kwawo, ngokungcolisa itabernakele lami eliphakathi kwawo. + 32 “‘Lona umthetho ophathelene nendoda ephuma ukungcola esithweni sayo sangasese, indoda engcolile ngenxa yokuphuma kwesidoda, + 33 owesifazane phakathi nokungcola kwakhe lapho esesikhathini, + nanoma imuphi owesilisa noma owesifazane ophuma ukungcola esithweni sangasese, + nendoda elala nowesifazane ongcolile.’”